Xiriirka Kubadda Cagta Ingiriiska Oo Si Kulul U Canaantay Taageereyaashiisa Oo Rabshado Ka Sameeyey Spain+Sawiro | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Xiriirka Kubadda Cagta Ingiriiska Oo Si Kulul U Canaantay Taageereyaashiisa Oo Rabshado Ka Sameeyey Spain+Sawiro
(15-10-2018) Xidhiidhka kubadda cagta Ingiriiska ayaa si xun u canaantay taageereyaasha xulka qaranka England ee ku sugan waddanka Spain oo rabshado dhiig ku daatay ka sameeyey magaalada Seville.
Raxan ka tirsan taageereyaasha xulka qaranka England u raacay dalka Spain ayaa si toos ah dagaal ugala hor tegay ciidamada booliska iyo muwaadiniin reer Spain ah, waxaana muuqaallo laga duubay ay soo bandhigeen iyagoo muraaiyadaha ka jebinaya baabuurta ag maraysa gudaha magaalada Seville, inkasta oo qaarkood ka cawdeen booliska oo sin u garaacay.
War-saxaafadeed uu soo saaray xidhiidhka kubadda cagta FA ayaa waxa lagu sheegay in hab-dhaqanka jamaahiirtoodu uu yahay mid aan sinaba loo aqbali karin, waxaana ay ka codsadeen inay ixtiraam kula joogaan dadka ay martida u yihiin.
“Waanu cambaaraynaynaa mana ah hab-dhaqan la aqbali karo waxa ka dhacay Sevillle.” Sidaas ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka kasoo baxay Xidhiidhka FA, waxaanu intaa ku daray: “Ciyaartu waxay dhacaysaa caawa, waxaananu usoo jeedinaynaa kuwa la socda xulka qaranku inay ixtiraam martigeliyeyaashayada, aanay u dhaqmaan si masuuliyad leh.”
Ma jirto cid u dhalatay Ingiriiska oo la xidhay, hase yeeshee waxa jira dhaawacyo halis ah oo jamaahiirta qaarkood soo gaadhay, waxaana xidhiidhka kubadda cagta Ingiriisku uu ka dalbaday inay ciidamada booliska la shaqeeyaan, iyagoo dhinaca kalena hanjabaad u diray qof kasta oo rabshad sameeya.
“Waxa aanu xayiraad socdaalka ah saari doonaa qof kasta oo la socda kooxda oo masuul ka noqda ama sameeya qalalaase.” Ayaa lagu yidhi.
In ka badan 100 qof oo taageereyaal u dhashay Ingiriiska ayaa bishii March lagu xidhay magaallada Amsterdam xili ay dhacaysay ciyaar saaxiibtinimo oo u dhaxaysay England iyo Holland. 13 ka mid ah kuwa la xidhay ayaa la aqoonsaday inay ahaayeen kuwii rabshadda sameeyey, isla markaana webi ku yaalla gudaha magaalada caasimadda ah ku riday dad baaskilado watay, taas oo keentay in toban ka mid ah lagu soo rogo xayiraad socdaalka ah oo gaadhaysa saddex sannadood iyo badh.
Koobkii Adduunka ee lagu qabtay Ruushka, jamaahiirta Ingiriiska ayaa u dhaqmay si edeb leh, waxaana 7,000 qof oo la socday xulka dalkooda laga xidhay saddex qof oo kaliya.